Vokatry ny parallax ao amin'ny PowerPoint 2019
Tsy latsaky ny dimy ambin'ny folo minitra dia efa nahazo ny fomba ilaina hamoronana vokatra paralaks faran'izay tsara ianao. Hizotra tsikelikely, ho hitanao amin'ny mpanoratra ny fomba fanaovana kopia sary ao amin'ny PowePoint. Vondrona vondrona, ny fampiasana gradien-loko eo afara. Ary koa ny fikirakirana ny bokotra fitendry samihafa. Lahatsary iray izay hitondra anao any amin'ny sehatra hafa amin'ny fampisehoana PowerPoint….
Vokatry ny parallax ao amin'ny PowerPoint 2019 3 Janoary 2021Tranquillus
HAMAKY Ny fototry ny Google Docs
Teo alohaAhoana ny fomba fanaovana sarintany.
manarakaMampiasà zoma amin'ny PowerPoint 2019
Fahatakarana ny fiankinan-doha
Fivoriana fampahalalana - Tetezamita matihanina
Fifanarahana fianarana amin'ny sehatry ny daholobe